Howl galo Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay saakay ka wadaan wadada Warshadaha ee magaalada Muqdisho | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Howl galo Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay saakay ka wadaan wadada...
Howl galo Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay saakay ka wadaan wadada Warshadaha ee magaalada Muqdisho
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa saakay howl gallo ballaaran waxay ka wadeen qeybo ka mida xaafadaha ku yaalo jidka Warshadaha, iyadoo howl galkan uu saameeyay isu socodkii dadka iyo gaadiidka.
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya xaafadahaas howl galkan ayaa ka socda inta u dhaxeysa ex koontarool afgooye, agagaarka kuliyadii Jaalle Siyaad ilaa xaafadaha Zone K iyo sey biyaano ee degmada Hodan.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada wadajirka u fulinaya howl galka ay xireen wadooyinka, isla markaana dadka iyo gaadiidka loo diidayo inay wadada maraan.
Wadooyinka oo dhan saakay waa la xiray ilaa ex koontarool ayay ciidamada joogaan, dhalinyarada la qabanayo waxaa lagu guray gaari shabaqle ah”ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka.
Howl galkan ayaa la sheegayaa inuu qeyb ka yahay howl galada ammaanka lagu xaqiijinayo, kaasoo horay laamaha ammaanka ugu baaqeen, kaas oo inbadan laga fuliyay xaaafadahaas iyada oo lagu soo qabqabtay dhalinyaro aad u fara badan kuwaas oo aan qaar ka mid ah la horgeynin wax maxkamad ah iyadoo laxusay in intooda badan lagusoo daayay madax furasho maadaama aysan laheyn wax danbi ah.
Ma jirto ilaa iyo hada cid ka hadashay howl galada, waxaana uu ku soo beegmayaa, iyadoo mudooyinkii u dambeeyay qaraxyo ka dhacayeen Muqdisho.
Previous articleMas’uuliyiin ay ka mid yihiin Afhayeenka Amisom iyo Gudoomiyaha Gobalka Hiiraan oo ka hadleen weerarki Buulo Burde
Next articleMdaxweyne xasan oo Xaafiiskiisa ku qaabilay qaar ka mid ah Beesha Caalamka